🥇 Akaụntụ na ịchịkwa njem
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 281
Video nke ndekọ ego na njikwa nke njem
Dezie ndekọ na njikwa nke njem
Nyocha ego nke njem site na mmemme USU-Soft nke ụwa niile na-enyere gị aka ijikwa akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ! A na-eme nhazi na njikwa nke njem site na otu usoro njikwa ozi njikwa. Ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ n'ime ya dị ka akụkụ nke otu usoro teknụzụ. Usoro mmemme nke njem na-egosiputa ozi ma n'ihe gbasara iwu onye ọ bụla sitere n'aka ndị ahịa, yana otu esi emekọ iwu ahụ. N'ime usoro njikwa ụgbọ njem, enyere ụfọdụ ndị ọrụ ikike ịnweta ụfọdụ. Ofkpụrụ nke ịrụ ọrụ na ịbịaru usoro mmemme nke njikwa nke njem nwere ike ịdị iche dabere na iche nke ndị ahịa: ọ nwere ike ịbụ njikwa nke ụgbọ ibu, na njikwa nke njem n'okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, wdg.
Mmadu kwesiri iburu n’uche na njem njem na-enwekwa njirimara nke ya. Enwere ike ịmekọrịta njikwa njem na weebụsaịtị ụlọ ọrụ yana sistemụ ndị ọzọ dị iche iche. Akpaaka nke ndị njem na ibu njem bụ ọrụ kachasị mkpa nke onye njikwa ọ bụla, n'ihi na iwu, ego nke nzukọ na ịkwanyere ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ isi dabere na nke a!
Njikwa ụgbọ njem na-amalite site na ịkwado ndị ahịa. Ngwa anyị na-enye nwere ngwa ọrụ iji kpọtụrụ ndị ahịa. N'ihi ya, ị nwere ike ijere ha ọrụ gị n'ụzọ kachasị mma, na-ahapụ ha niile afọ ojuju. Enwere ike ịdenye ndị ahịa ozi niile dị mkpa, dị ka nọmba ịkpọtụrụ na ihe ndị ọzọ. Nke a na - enye gị ohere ịkpọtụrụ ndị ahịa gị, yana nzukọ nzukọ na mkparịta ụka. Njikwa njem na lọjistik na sistemụ njikwa njikwa nke USU-Soft na-ejide n'aka na ngwa ọ bụla anaghị ahapụ anya, dịka onye ọ bụla n'ime ha nwere ọkwa: mbido, na-aga n'ihu, ịjụ, e mechara. I nwekwara ike ịgbakwunye ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ na arịrịọ nke onye ahịa. Akpaka ajụjụ nke mba na okporo ụzọ na-agụnye guzobe nke dị iche iche akwụkwọ: ngwa, contracts, wdg The njem ụgbọ njem software na-enye mfe nnweta management akụkọ. Ntinye nke usoro njikwa ihe n ’ụlọ ọrụ na - enyere aka bulie ugwu nke nzukọ gị.
Njikwa nhazi na ngwa USU-Soft na-enyekwa ohere ịchịkwa usoro ọrụ niile. Njikwa ego ga-eme nke ọma na ntinye nke usoro nyocha nke njikwa njem. Na-agbakwunye na atụmatụ niile nke atụmatụ, anyị na-enyekwa gị ohere dị iche iche. Nwere ike ibudata atụmatụ nke atụmatụ n'efu na weebụsaịtị anyị. Usoro mmezi nke njikwa ụgbọ njem na-enye ohere dị mfe maka njikwa mkpesa, nke ga-eme ka arụmọrụ nke ngwa ngwa niile bawanye. Akụrụngwa ebe ọrụ na ngwa anyị na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ, nke ga-enwe mmetụta dị mma n'ịbawanye mkpali ha. Usoro a na --eme sistemụ ozi dị elu dị otu a bụ ọrụ nwere ọrụ na-ewe oge. Anyị na-enye gị ngwaahịa dị elu! Nchịkọta njikwa a na mmemme nke njikwa njikwa na-enye nkọwa ebumnuche nke ọrụ nke ndị ọrụ ọ bụla. Usoro mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ na-aga nke ọma ma nwee ezi uche mgbe ị na-eji usoro njikwa ego. Nyocha Excel nke ngwongwo bụ ihe a na-apụghị ịdabere na ya ma bụrụkwa nke ochie na usoro azụmahịa dị ugbu a. Usoro ihe omume nke njikwa ego na-enye gị ohere ọ bụghị naanị iji rụọ ọrụ na ozi, kamakwa ịchekwa ya na ebe nchekwa maka ogologo oge ịchọrọ.
Gbakwunye ndị ọrụ ọhụụ na ịnye ha ikike ikike abụghị usoro dị ogologo ma gbagwojuru anya. Usoro nlekọta njem nke njikwa na-agụnye ịkọwapụta akụkụ ego nke ngwa ọ bụla. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịdebanye aha azụmaahịa ọ bụla ọzọ nke na - ejikọtaghị na otu ngwa ị nwere ike ime ya n’enyemaka nke mmemme anyị. The ajụjụ software nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ na-akpali atụmatụ! Nwere ike ịnweta ha n’onwe gị site na ibudata ụdị ngosi ngosi na weebụsaịtị anyị.
Njikwa abụghị naanị ihe a pụrụ ịdabere na ya, kamakwa ọgbara ọhụrụ, n'ihi na agbakwunyere ngwanrọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ nkwukọrịta ọgbara ọhụrụ na ụzọ ọrụ aka. Mwekota nke ngwanrọ na kamera vidiyo na-enye njikwa vidiyo na-akpaghị aka na mmata nke ugbo ala na ndị ahịa. Mmekọrịta na akụrụngwa na nkwakọba ihe ga-enyere aka igbochi ohi, na njikọ na weebụsaịtị na PBX bụ ohere iji dọta ndị ahịa ọhụrụ. A ga-esepụta ụzọ ụgbọ ala ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi karị, ebe ndị ọkachamara ga-enwe ike iburu n'uche ọnụ ọgụgụ na-enweghị atụ na ngwakọta nke ihe - oge, ụdị izipu, ihe a chọrọ maka njem, ọchịchọ nke ndị ahịa. Mbupu ọ bụla na sistemụ anyị nwere ike ịchịkwa site na mmalite ya na njedebe ya. Onye na-ezipụ ga-esochi ibu na ụzọ site na iji maapụ elektrọnik na ilekwasị anya na data geolocation. Ndị ọkwọ ụgbọ ala, na-amara na a hụrụ ha, agaghị emebi ụzọ, oge na usoro. Usoro ihe omume nke njikwa ego na-agbakọ ọnụahịa, mmefu nke ọrụ ụgbọ ala, yana ngwaahịa, na-eji usoro ziri ezi na nke ziri ezi. O kwere omume dịka ndepụta ọnụahịa dị iche iche, na tarifu dị iche iche, na usoro nke ọ bụla enyere ndị ahịa.
Sọftụwia ahụ na - enye gị ohere ịme ngwangwa ọ bụla na - arụ ọrụ ọfụma oge niile, n'ihi na a ga - ewepụta akwụkwọ ndekọ aha elektrọnik dị mfe na mmemme njikwa. Enwere ike ịkọwa ugbo ala ejiri mee njem dịka data ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ozi nrụtụ aka na faịlụ kọmputa ọ bụla ma tinye ya na sọftụwia ahụ.